पत्नी पिडित भएँ भन्दै पति र पूर्वपति एकसाथ मिडियामा (भिडियो) – PathivaraOnline
Home > समाचार > पत्नी पिडित भएँ भन्दै पति र पूर्वपति एकसाथ मिडियामा (भिडियो)
पत्नी पिडित भएँ भन्दै पति र पूर्वपति एकसाथ मिडियामा (भिडियो)
admin July 20, 2019 समाचार	0
पोखरा। स्याङ्जा जिल्ला, पुतलीबजार नगरपालिका देखि एक पुरुष मिडियालाई भेट्न पोखरा सम्म आए । ति व्यक्तिको नाम हो राम प्रसाद अर्याल । उनि बैदेशिक रोजगारको शिलशिलामा कतारमा हुदा सबिता कार्की नाम गरिएकी एक महिला संग सामाजिक संजाल फेसबुकमा चिनजान गर्छन । चिनजान पछी उनीहरुको बोलचाल बाग्लिदै जान्छ र उनीहरुको साइनो प्रेमी प्रेमिकामा बदलिन्छ ।
केहि समय पछी राम प्रसाद नेपाल आउछन र उनीहरुले विवाह पनि गर्दछन । उनीहरुले गत मंगसिर महिनामा विवाह गरेका हुन् । वास्तवमा राम प्रसाद र सबिता दुवै विवाहित हुन् । सबिताले आफ्नो डिभोर्स गरिसकेको भनेको हुनाले हामीले विवाह गरेपनि आफुलाई धोका दिएको राम प्रसाद बताउछन । तर त्यो भन्दा पनि अचम्मको उनको अर्को आरोप छ । सबिताले खासमा आफ्नै श्रीमानसंग योजनाबद्द् तरिकाले पैसाको लागी फसाएको राम प्रसादको आरोप छ ।
वास्तवमा सबिता र उनको श्रीमानको धेरै ऋण भएको हुनाले आफुलाई फसाइएको राम प्रसादको आरोप छ । सबिताको दुई करोड रुपैया ऋण भएको र उनको साहुहरुले आफुसंग पैसा माग्न थालेपछि उनले यसको रहस्य थाहा पाएको बताउछन । तर यता पुर्व श्रीमानका अनुसार योजनाबद्द् तरिकाले हामीले राम प्रसादलाई नफसाइएको बरु पुर्व पत्नीले नै आफुलाई बर्बाद बनाएको बताए । अर्को रोचक कुरा त के भने यी दुवैका श्रीमती र पुर्व पत्नी अहिले गायव छन ।पुरा कहानी तलको भिडियोमा हेर्नुहोसः
Exclusive !! कोसंग यस्तो अवस्थामा थिइन् साम्राज्ञी ? इन्स्टाबाट एकाएक यस्तो फोटो भाइरल भएपछि…
उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवलाई रमेश प्रसाईको कडा प्रहार (भिडियो)
दाङबाट आयो यस्तो दुःखद खबरः अध्यक्ष चढ्ने गाडीकाे यस्तो हालत कस्ले गर्यो?